Matsiatra Ambony: hanatsara ny voaloboka aloha ny Lazan’i Betsileo | NewsMada
Matsiatra Ambony: hanatsara ny voaloboka aloha ny Lazan’i Betsileo
Amin’izao fameloma-maso ny Lazan’i Betsileo izao indray, imasoana voalohany aloha ny fanatsarana ny voly voaloboka hahazoana vokatra betsaka sy tsara kalitao. Omena tohana amin’izany ireo tantsaha mpikambana mpamboly voaloboka ao amin’ny distrikan’Isandra sy i Lalangina. 144 ireo mpamboly mpikambana any Isandra, nomena 30 tapitrisa Ariary, 5 % ny fandraisana anjara avy amin’izy ireo. 81 kosa ireo mpamboly avy any amin’ny distrikan’i Lalangina, nahazo tohana 18 tapitrisa Ariary ka 5 % koa ny anjaran’izy ireo. Omena fiofanana ireo tantsaha ireo ho fanatsarana ny voly voaloboka.
Niorina ny taona 1971 ny Lazan’i Betsileo, fiaraha-miasa tamin’i Soisa. Toy ny orinasa malagasy maro, nandalo krizy ary nitsahatra tamin’ny asany ny taona 2000. Niverina nisokatra ny taona 2006, noho ny fiaraha-miasa amin’ny mpanao divay any Bourgogne sy any Bordeaux, Frantsa. 456 t ny vokatra voaloboka tamin’io fotoana io, tafakatra 700 t ny taona manaraka, ary nihatsara hatrany.
Niverina nitotongana indray ny Lazan’i Betsileo, ny taona 2012, ary izao ezahina haverina amin’ny lazany izao. Kendrena voalohany ny hamokatra voaloboka 272 t ao amin’ny distrikan’Isandra amina velaran-tany 50 ha. Efa nisy fotoana, ny 2008, niaraha-niasa tamin’ny FHORM*, namokarana kalitao miavaka ho an’ireo trano fisakafoana sy nampahafantarana tamin’ireo mpizahatany ny « Vita malagasy ».
FHORM* : Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar